Izindaba - Sebenzisa Futhi Ukuqapha Of DEET
I-DEET yaziwa nangokuthi i-N, n-diethyl-m-toluidamide. I-DEET yasungulwa okokuqala phakathi neMpi Yezwe II futhi yathuthukiswa nguMnyango Wezolimo wase-US. Yasetshenziswa amasosha ase-US ngo-1946 futhi yabhaliselwa ukusetshenziswa emphakathini e-United States ngo-1957. Ithengiswe emakethe njengesidakamizwa sokuxosha omiyane kusukela ngo-1965.
Cishe iminyaka engama-70 yocwaningo ikhombisile ukuthi i-DEET inethonya lokuxosha omiyane abahlukahlukene (omiyane, izimpukane, amazeze, ama-Chigger Mites, ama-midges, njll.) Futhi ingavimbela ngempumelelo ukulunywa omiyane. Kodwa-ke, akuphumelelanga izinyosi, iSolenopsis invicta, izicabucabu nezinye izindlela zokuzivikela zokuluma, ngoba zihlukile kuma-arthropods amunca igazi, futhi bafuna ukumisa lokhu kuziphatha okweqile ngaphandle kokuthi basebenzise izinambuzane noma ama-switters kagesi kagesi nezinye izindlela.
Indlela ye-DEET ayikacaci. Kwaqale kwacatshangwa ukuthi kungavimbela izinambuzane ezimunca igazi ekusondeleni emzimbeni womuntu ngokudlala iphunga elivimbelayo.
Kodwa-ke, i-DEET ingavimbela impendulo ye-electrophysiological yomiyane ku-lactic acid naku-1-octen-3-ol compounds, imaski noma ivimbele uhlelo lomiyane lokuthinta, futhi ivimbele ukuqashelwa kwesisulu esifanele.
Kamuva, kwatholakala ukuthi i-DEET isebenza ngqo kuma-neuron akhethekile e-antenna omiyane futhi ikhiqize umphumela wokuxosha, kepha ayivimbeli umbono we-lactic acid, i-CO2 ne-1-octen-3-ol.
Ucwaningo lwakamuva luphinde lwathola ukuthi inhlanganisela ye-DEET nokunye okubhekiswe kwamangqamuzana ukuphendula kokuqala kwamakhemikhali ukukhomba izinto zangaphandle, kepha lokhu okutholakele kudinga ukuqinisekiswa ngokuhamba kwesikhathi.
Ukusetshenziswa Nezinyathelo Zokuqapha
Ngokuvamile, i-DEET inokuphepha okuphezulu nobuthi obuphansi. Izifundo ezikhona zikhombisa ukuthi i-DEET ayinayo imiphumela ye-carcinogenic, teratogenic kanye nentuthuko. I-Centers for Disease Control and Prevention (CDC) incoma ukuthi abesifazane abakhulelwe nabancelisayo basebenzise i-DEET (ngokufana nabantu abadala abangakhulelwe) ukugwema ukulunywa omiyane nokunciphisa ubungozi bezifo ezithathelwanayo. Ngasikhathi sinye, iAmerican Academy of Pediatrics (AAP) incoma ukuthi izinsana ezingaphezulu kwezinyanga ezimbili zisebenzise i-10% - 30% ye-DEET, ephephile futhi esebenzayo, futhi akufanele isetshenziswe kaningi ngosuku. Ayifanele izinsana ezingaphansi kwezinyanga ezimbili ubudala
Okuqukethwe kwe-DEET emakethe kusuka ku-5% kuya ku-99%, futhi kwatholakala ukuthi umphumela wokuxosha we-10% kuya ku-30% we-DEET wawufana. Kodwa-ke, isikhathi esisebenzayo se-DEET ezindaweni ezahlukahlukene sasihlukile. I-10% ingahlinzeka cishe ngamahora ama-2 wesikhathi sokuvikela, kuyilapho i-24% inganikela ngamahora angama-5 wesikhathi sokuvikela. Ngaphezu kwalokho, ukubhukuda, ukujuluka, ukusula nemvula kunganciphisa isikhathi sokuvikelwa se-DEET. Kulokhu, i-DEET enokuhlushwa okuphezulu kungakhethwa.
Kumele kuqashelwe ukuthi ngaphezu kwe-30% ye-DEET ayikwazi ukukhulisa kakhulu isikhathi sokuvikela, kepha ingavela ukuqubuka kwesikhumba, amabhamuza nezinye izimpawu zokucasuka kwesikhumba, futhi ingahle ibe ne-neurotoxicity engahle ibe khona.
Isikhathi seposi: 01-06-21
I-2-Methyl-4-Nitrobenzoic Acid, I-N, N-Diethyl-3-Methylbenzamide, I-Potassium Sulfate, I-2-Methyl-3-Nitrobenzoic Acid, I-2-Methylbenzoic Acid, O-Toluoyl Chloride,